Turkiga oo hub casri ah ka iibsanaya Russia – Madal Furan
Hoy > Warka > Turkiga oo hub casri ah ka iibsanaya Russia
Madal Furan – Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in dalkiisu heli doono waqto dhow hanaanka gentaalada difaaca ee loo yaqaano S-400 ka dib heshiis ay wada galeen dalka Russia.
Isaga oo ka hadlayay xaflad qalin jabin ah oo loo qabtay saraakiil, ayuu hadalkan ka sheegay gobolka waqooyiga galbeed ku yaala ee Balikesir.
Erdogan ayaa intaa ku daray in Turkiga oo ku howlan yahay ilaalinta danahiisa gudaha iyo gobolka iyo ka hor tagida kuwa raba in ay danahooda ku jaangooyaan arrimaha gobolka.
Decembertii la soo dhaafay ayaa Turkiga iyo Russia ay ku heshiiyeen in laga iibiyo labo hanaan gentaal difaaca ee S-400 ka hor sanadka 2020.
Bisha April ee sanadka soo aadan ayaa labada dhinac isku afgarteen in qeybta ugu horeysay la keeno Turkiga
Hanaanka gentaalada difaaca S-400 ayaa ah kan ugu horumarsan ee difaaca cirka, waxaana uu awoodaa in uu burburiyo bartilaameedyada, gentaalada ballistic loo yaqaano iyo kuwa lagu magacaabo cruise missiles.
Bishii June, golaha Senate-ka Mareykanka ayaa hor istaagay qorshe Turkiga Mareykanka kaga soo iibsan lahaa diyaaradaha dagaalka ee loo yaqaano F-35, ayagoo ka dooday in Turkiga hanaanka gentaalada S-400 Russia ka soo iibsanayo iyo xariga muwaadiniinta Amerikaanka ah ee Turkiga.
Labadan dal ee ku wada jira xulada NATO, ayaa xiisad siyaasadeed soo kala dhex gashay ka dib markii Baadari Mareykanka ay lagu xirey Turkiga kaas oo lagu eedeeyay in uu xiriir la leeyahay kooxda PKK ee Kurdiyiinta ah iyo wadaadka dibad jooga ah e Fatxulah Gulen.
Mareykanka ayaa talaadaas kaga jawaabay cuna qabateyn dhaqaale oo ay ku soo rogay Turkiga taas oo keentay in qiimaha lacagta Lira ee Turkiga oo hoos u dhac balaaran soo wajaho.
Gudoomiye Xisbiga Waddani oo kalsoonidii kala noqday Kumishinka doorashada Somalialand
Ra’iisal Kheyre oo wasiir cusub u magacaabay Wasiirkii Howlaha Guud ee shalay is casilay
Dr Abiy Axmed oo lagu yiri tiisa daryeelaa tu kale ku dara